आज देशभर के हुदैछ ? के छन् आज भदौ ५ गतेका मुख्य समाचारहरु ? हेर्नुहोस | RatoTara.com Websoft University
आज देशभर के हुदैछ ? के छन् आज भदौ ५ गतेका मुख्य समाचारहरु ? हेर्नुहोस
काठमाण्डौ भाद्र ५ गते । रातो तारा डट कम,प्रक्रिया पुरा गरेका स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ सकिएको छ । गत जुलाई महिनासम्म लाइसेन्स कार्यालयहरुले नयाँ जारी गर्ने र नवीकरण गर्ने गरी विभागमा छाप्न पठाएका सबै स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ सकिएको हो ।
छपाइ ढिलो हुँदा करिब ४ वर्षदेखि स्मार्ट लाइसेन्सको वितरणमा समस्या छ । तर, लकडाउनका कारण नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने क्रम लगभग रोकिएपछि विभागले पुरा लाइसेन्सको छपाइ सकेको हो । गत वर्ष इटालीबाट विभागले मास प्रिन्टर पनि किनेरल्याएकोथियो ।
सबैजसो प्रदेशमा कोरोनाको महामारीका कारणा सवारी लाइसेन्सको परीक्षा बन्द भएका छन् भने नवीकरणको क्रम पनि पातलिएको छ । यसले गर्दा विभागमा छापाइ गर्नुपर्ने लाइसेन्सको चाप घटेको थियो । यही मौकामा विभागले लगातार छपाइको काम गरेर ‘ब्याक लक’ फुकाएको हो । योसंगै आजका मुख्य समाचारहरु तलको भिडियोमा हेर्नुहोस